Guudmarka - Florida International Trade Expo
Bandhigga Ganacsiga Caalamiga ee Florida
Maarso 16 - 18, 2021 | Fudud
RIIX HALKAAN SI AAD U HELI KARTO QAYBTA JOOGTADA
Baadhitaanka Bandhigga Ganacsiga Caalamiga ah ee Florida
Eeg cashar gaaban oo fiidiyow ah si aad wax badan uga barato barmaamijka dhacdooyinka muuqaalka ah iyo sida loola macaamilo soo bandhigayaasha.
Nooca Tarjumaadda Ingiriisiga
Nooca Tarjumaadda Isbaanishka
Bandhig Faneed Qeybo Badan oo Florida ah
Alaabada Hogaanka ah iyo
Enterprise Florida, (EFI), hay'adda rasmiga ah ee horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga ee Gobolka Florida, waxay ku faraxsan tahay inay soo bandhigto marki ugu horreysay abid ee Florida Expo International Expo, bandhig muuqaal ah oo ka kooban 150 + oo ka mid ah wax soosaarka iyo adeeg bixiyeyaasha gobolka.
Kumaa Ka Soo Qayb Galaya?
Wakiilo, qeybiyeyaal, iibsadayaal, wakiilo, iyo jumlayaal iibiya alaab tayo sare leh oo loogu talagalay qeybinta iyo iibinta Yurub, Latin America iyo Caribbean, Canada, Mexico, Africa, Asia iyo Bariga Dhexe.
Bandhiggu wuxuu soo bandhigayaa fursado farsamo oo aan xad lahayn!
Ku xidhnow carwadayaasha Florida
Diyaarso Kulamo Ficil ah
Shabakad leh asxaabta Warshadaha
u fiirso waxyaabaha ku jira warbaahinta tooska ah
Kuula xariirta adiga go'aan qaadayaasha Florida ee ka kala socda warshado kala duwan.
Qeybaha warshadaha waxaa ka mid noqon kara, laakiin aan ku xaddidnayn:
Waxbarasho & Tababar
Dabka & Badbaadada
Qalabka & Qalabka Warshadaha
Seegay dhacdadii tooska ahayd? Barxadda dalwaddii ayaa hadda u furan martida.
Miyaad mar hore iska diiwaan gelisay?
Soo gal halkan
Madasha Dhacdada ayaa la heli karaa dhacdo 30-maalmood kadib ah.
Dhacdadan waxaa kafaala qaaday oo taageeray:
Email floridaexpo@enterpriseflorida.com haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan ka-qaybgalka iyo diiwaangelinta Bandhigga Ganacsiga Caalamiga ee Florida.